ခင်ဦးသာ| December 18, 2012 | Hits:10,144
| | မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ် ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့တွင် ပြည်တွင်း ရွှေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည် (IDP) များကို တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Kachin Waves / Facebook)
ရန်ကုန်-မန္တလေး အဝေးပြေးလမ်းနှင့် လေဆိပ် ပြင်ဆင်ရေး အမေရိကန် ကူမည်ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ အားတက်ဖွယ် မရှိသေးဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီးအပေါ် သူတို့အမြင်မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အားပေးမည်ဟု အိုဘားမားပြောကရင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အားလုံး စည်းလုံးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းကြမည် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Salai Lian December 19, 2012 - 4:24 am	We are eager to hear from the US Ambassador what he sees in Kachin State and what his evaluation is. I am so glad that he sees with his own eyes. Making the Kachins become refugees on their own land is eternal history of the so-called democratic government under the leadership of Thein Sein.